အရေးပေါ်. (Useful.Apk) ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Android App » အရေးပေါ်. (Useful.Apk)
သားအခုတင်ပေးမယ့် Apk လေးကတော့ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးတာပါ ဘာလဲဆိုတော့ အရေးပေါ် ဆိုတဲ့ Apk လေးပါ သိတဲ့သူလည်း ရှိသလိုမသိတဲ့ လူလည်းရှိမှာပါ သူက အရေးကြီးတဲ့အချိန်၊ အလျှင်လိုနေရတဲ့ အချိန်မှာတွေဆိုရင်တော့ 199 ကို ခေါ်ဖို့ (1) Click လေးပါပဲ။ နှစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ စတဲ့ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက 199 ရာက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။